Ny mpahay lalàna, Imbiki Herilaza: “Ny praiminisitra no tena mitantana ny firenena” | NewsMada
Ny mpahay lalàna, Imbiki Herilaza: “Ny praiminisitra no tena mitantana ny firenena”
Miteraka adihevitra ny amin’ny fitantanana ny firenena taorian’ny fametraham-pialan’ny filoha sy ny fandraisan’ny mpisolo toerana vonjimaina izany. Nitondra ny heviny ny mpahay lalàna.
“Manoloana ny fahefan’ny praiminisitra izay avy amin’ny lalàmpanorenana, eo indrindra koa ny didy fanapahana navoakan’ny HCC, ny 25 mey: raha dinihina sy ampitahaina amin’ny fahefan’ny filoham-panjakana amin’izao sy ny an’ny praiminisitra lehiben’ny governemanta, ny praiminisitra no tena mitantana ny firenena amin’izao. ”
Izay ny fanazavan’ny mpahay lalàna, i Imbiki Herilaza, ny amin’ny fandraisan’ny filoham-panjakana mpisolo toerana vonjimaika fahefana taorian’ny fametraham-pialan’ny filoha teo aloha.
Tsy vitan’ny hoe mitantana ny firenena ny praiminisitra, satria lehiben’ny fitantanan-draharaham-panjakana, fa izy ihany koa no tomponandraikitra voalohany amin’ny fampandehanana ny raharaham-pifidianana. Raha ampitahaina ny fahefan’ny praiminisitra sy ny filoham-panjakana: marina fa ambonimbony ny filoham-panjakana, saingy latsaka be ny fahefana manoloana ny fahefan’ny praiminisitra, araka ny nambarany.
Nandefa taratasy teny amin’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC) ny filoham-pirenena teo aloha fony mbola tsy niala. Nangataka mazava ny famaritana ny fahefan’ny filoham-pirenena mpisolo toerana izy. Namaritra mazava ny hevitra lah. 7 navoakan’ny HCC tamin’izany: filoham-panjakana fa tsy filoham-pirenena ny filoham-pirenena mpisolo toerana. Araka izany, voafetra ny fahefana ananany.
Mazava ny asan’ny filoha teo aloha sy ny filoham-panjakana: ny iray, filoha voafidim-bahoaka tamin’ny fifidianana nandraisan’ny dahalobe anjara mivantana; ny iray, filoha mpisolo toerana fotsiny.